Dood Qaran Qaybtii Afraad (IV)
Dood Qaran Qaybtii Afraad (IV) Qore: Cabdulqaadir Aaden Maxamed "Jangeli"Saturday, July 14, 2012
Diiriye Hingo oo aan seexan illa uu soomaro laba fadhi midkood oo midna rag ruug caddaya, badankoodna ka mid-ahaan-jiray dowladihii hore oo taariikh ku nool ah kana sheekeeya wixii hore iyo beri samaadkii Soomaaliya; midka kalena ay fariistaan dhaliyarada cuslaatay oo si huffan uga dooda dhibaatada Soomaalida iyo xalkeedu meeshuu ku jiro. Wuxuu Diiriye Hingo xiiseeyaa fadhiga dhalinyarada cuslaatay oo uu aaminsanyahay in uu wax ka kororsado madaama intoodaban ay mutacallimiin yihiin kana doodaan waxa maantay jira, odorosanna aayaha Soomaaliya, mararka qaarkood dhigeystaan Diiriye Hingo oo aad xogogaal u ah waxa magaalda ka socda iyo wararka Soomaaliya ka imaanaya. Waayihii kacaanka Diiriye Hingo iyo ragga la midka ahaa xabsi kama bixijirin oo waxaa loo yaqaaney afmishaar, hatanse waxaa loo aqoonsanyahay waxgarad madaxbannan oo aan biqin. Cashadii kaddib markii ay kala tageen saaxiibadiis Timiro iyo Sahal, Diiriye Hingo wuuxuu soo aaday gura Bile oo ay la fadhiyaan Abdullahi, Cartan, Dr. Mukhtaar iyo xildhibaan Suuban oo ah marwada Bile u dhaxda oo aan si rasmi ah fadhiga uga mid ahayn maxaayeelay qaadkana ma cunto, shah karis iyo casho karinta carrurta ayey mashquul ku tahay inta badan warse ma seego oo way dhaga-wadantahay isla markaana way ridataa hadalkamarkeeda.
DIIRIYE HINGO: Salaama caleykum. Meesha caaway maxaa lagu hayaa?
BILE:Calaykuma salaam. Soo dhawow Diiriye, wajigaaga war xiisa leh baa ka muuqdee bal noo warran, maxaa soo kordhay?
DIIRIYE HINGO:Xiise miyaad tiri mise-waa mid kuraas badan la iiga kicidoono!
BILE: Waaba arrin cajiibe, bal soo daa xurmada intaas le’eg waxaad ku mutaysatay.
DIIRIYE HINGO:Anigu Caaway waxaan la soo casheeyey nin Madaxweynaha Soomaaliya u sharraxan, waxaanna ku hanweynahay markuu guuleysto in aan wasiirka macdanta iyo khayraadka badda noqdoono.
BILE:Oo ninkaasi waa waa-kuma?
DIIRIYE HING: Idiin sheegimaayo saad haragaad ka fiiqeysaane!
BILE:Waayahaye magaciisa ha noo sheegine, khaanadee ku jiraa, waadigii musharraxiinta midba khaanad gelinjiraye?
DIIRIYE HINGO:Ninkaani Ingiriiskuu ka yimid oo khaanadwalba waa gelikaraa.
CARTAN:War Diiriye Hingo iska-daaya wuxu ninkaan u qarinaya waa qolooyinkii Isbuufiska qabayoo ku qabso ku qadi maysida meesha u yimide.
BILE:Oo horta Diiriye Hingow maxaad ku dooratay in aad noqoto wasiirka macdanta iyo khayraadka badda? Ninkaan madaxweynaha isu-sharraxay haddad saaxiib-tihiin, isku reer-na- ahayn maad wasaaradaha waaweyn ee qabiilada lagu maslaxo sida Maaliyadda, Arrimaha dibadda, Gaashaandhigga iyo arimaha gudaha midkood dooratid?
DIIRIYE HINGO: Kkkkk Allow nimaan war qabin ha cadaabin, war mataasaa isweydiin leh! Arrimaha macdanta iyo badda waxaad la macaamilaysaa shirkado ajnebi ah iyo dowlado aad heshiisyo baaris batrool iyo bixinta baddena la geli-kartid. Ciduna xisaab celin meel kulama fadhido sida UNDP, Turkiga iwm, oo dhaqaalaha wasaaradaha aad sheegeysid bixiya. Waxaad halkaan iska daldalaneysaa xoolo aadan xadin oo xad-dhaaf ah oo hibo lagu siiyey, wasaaradaha kalese waxaad toos si bareer ah u xaddo mooyaane waxaad shufuq siineyso majirto, anigu xoolo xaaran ah akhiro la aadimaayo addun waa meeshiise.
BILE:Inna lillahi wa inna Ilaahi raajacuun. War xattoyada tan ugu xuni wa middad ka hadleysid oo wasaaradaha kale oo aad sheegeysid waxaad ka xadda waxay ku-simantahay inta aad wasaraddas joogtid inkastoo misanka danbigeedu aad u culusyahay, hadana tani waa mid waqaf kugu noqoneysa madaama dhibteedu waligeed soomaaliya la soconeyso. Ma maqashay ceel waqaf ah ama iskool ama isbitaal ama masaajid haddad dhisto xasanaad joogta ah ayaa kuu socondoona, taad sheegeysidna waa badalkeed oo danbi waqaf ah ayaa waligaa ku soconaya misaankiisu la-egyahay waxa ay ka helaan Shirkadaha iyo dowladaha aad u ogolaatay khayraadka ummadda si aad uga faaideysatid adigu.
DIIRIYE HINGO:Salaamaad,soo anigaan akhiro cadaabtii galilahaa! Maasha fadhigiina jeclaaday, meel halkaasa oo aan marmar tago, waa igu cowryilahaayeen guusha aan sugayo iyo barwaaqada ii iftiintay, waayahaanna odaga barkimooyinka geeskaas wanaagsan odhiga bay oranlahaayeen. Alla markaasaan kala badan lahaa oo isballaarin lahaa oo rummeysanlaha riyadaas.
SUUBAN: Diiriye Hingow ka digtoonow xoolo xaaraan ah hana ku riyoon xatta, maxaayeelay haddad ku riyootid danbi baa kaa racaya. Marka arrintaas islagaranay ee nooga waraan xaaladdi baralamaanka Soomaalida iyo meeshay mareyso.
DIIRIYE HING: Oo adigu soo kama tirsaneyn ma cid kaaga war- roon-baa jirta dadka meesha fadhiya, maad nooga warrantid adigu.
SUUBAN:Anigu waan ku wareeray oo markaan Xamar la hadlana waxaa la iisheegaa in Madoobe Nuunow ra’isul barlamaanka rasmigaa yahay, hadana Saxiixayaashana Sharif Sakiin baa la socda, loona citiraafsanyahay ra’isul barlamaanka Soomaalida.
DR.MUKHTAAR: Yaanaan gurigaa kaaga kicine,Suuban eraygaas xaal ka bixi afkaaganah uusan dib dambe u soo marin.
DIIRIYE HINGO:War gabadhu maxay dhintay, wayaabe, oo ay xaalka ka bixisaa?
DR.MUKHTAAR: Waad ogtahay waxay dhintay aniga afkeygu ma karikaro oo kuma celinkaro ceyda iyo qadafka madxda qaranka ay ugu yeertay.
CARTE:Diiriye Hingo, miyaadan garan? Gabadhu waxay dhintay waxkale ma ahee waa neynaasta Sakiin oo aad ogtihiin wixii ka dhacay shirkii Istanbul markii Caasha afkeeda uu ka soo baxay ereygaasu.
DIIRIYE HINGO:War nimaan neynaas-lahayn waa ri’ geesjaban baa la yiriye maxaa Shariifka loogu diidayaa neynaastiisa Shariifyada kalaaba looga soocayaaye. Tankale dadkuuba ku baqasanayaa in uu wax kala jarikaro oo aan loo soo dhawaakarin. Miyeydaan arag Madoobayaasha (Aadan Madoobe iyo Madoobe Nunow) meshuu la maro? Affar jeer aya barlamaanke laga qaaday hadana waakan oo melena uma socdo. Nin rag-ah iga dheh Shariif Sakiin!
CABDULLAHI:Horta yaa u bixiyey neynaastaan waa cajiibe?!
SUUBAN: Aniguna waxaan u maleynayaa in Abdullahi Yusuf u bixiyey markuu ka yaabay jirjiroole-nimadiisa. Waxaanna ogayahay oo markhaati ka ahay in uu ahaa ninkii ciidanka Xabashida Xamar soo geliyey dadkuse u qabo Abdullahi Yusuf in uu ahaa. Wuxuu ahaa ninkii Baidhabo 2006 barlamaanka in fariisiyey ka ansixiyey in ciidanka Xabashidu soo galaan Soomaaliya; nimankii ciidanku la dagaalayey ee maxkamadaha ahaana, madaxdoodii buu la cararay oo Eritrea la aaday.
CARTAN:Cajiib! Cid weligeed isweydiisay siday ku dhacday ciidanka soogalay waddenkeena ma jirto. Raggii Xamar la yimid baa la heystaye yaaba ogolaansha iyo sharciyeynta ciidanka Xabashida isweydiiye. Shariif Sakiina wuxuu ogaa in uu jariima weyn galay dabadeena wuxuu uga siibtay Cabdullahi iyo Ghedi asagoo ka midnoqday ragii ku dhawaaqay xorreynta soomaaliya ee Eritrea aaday.
DR. MUKHTAAR:Annaanimaad haysaane Shariif Xassan marna idinkaa yiraahda aqon maleh, afafka ajinbiga kuma hadlo oo skool ma dhigan, Xafiis iyo maamul dowlona weligiis ma qaban oo wuxuu ahaa ganacsade jeeble ah oo qaadka ka beecbushtara haddana waxaad leedihiin nin loo dhawaan karo ma-aha oo siyaasaddisa gudaha iyo dibaddaba nin loo-dhigaa ma jiro. War dhan isgu xiirma oo ninkaan ragnimadiisa u ogalaada.
BILE:Waa yahaye, aan arrintaas hakad gelinee, waxaa noo daran oo aan xiiseyneynaa howshi odayaal dhaqameedka loo idmaday meeshay mareyso.
CARTAN:Taas Cabdullahaan u dayneynaa in uu naga haqabtiro asagaa guddiyada farsamada ku jira.
CABDULLAHI:Arrintaas waa in aan si dhab ah u galanaa oo annaan sahlan, maxaayeelay masiirkii Soomaaliya ayaa miiska saaran, sacadduna haatan waa tobankii, haddi aan bilaabana caway waagaa inoo baryaya ee aan beri haddi Alle idmo u dhiganno una dad badsanno waa howl wajiyo badan lehe.
SUUBAN:Wa tala fiican weliba cashana waan idiin karinayaaya ee soo casuma wasiirkii dastuurka baa magaalada jooga la yiriye.
CABDULLAHI: Waayahay. Wasiirkii dastuurka ee Puntaland-na waa joogaa oo waan soo casumayaa asagana ee ku talogal.
DIIRIYE HING:Haddikale shirkaas iyo doodaas looma dhammeyn baa la oranayaaye...kkkkk.
Waa socotaa sheekadaani qeybta shanaad waxa soo baxaysaa Jamcaha July 20, 2012.